I-China i-Wholesale SS8 yokuThengisa okuTshisayo Ukurhweba ngeRhinestone, Ukucheba iPlastiki kweRhinestone yokunxiba eGuatemala Ukwenziwa kunye neFektri | U-Erjiao
Iinkcukacha ezithe kratya ziya kwiAlibaba yethu: https: //maijiao.en.alibaba.com
24 UMQULU RHINESTONE MESH
24 UMQULU RHINESTONE MESH NGAPHANDLE KWERHINIKI
Umgangatho ongcono we-Ss12 Ss8 yokubopha okungcono ngu-Y ...
Ihowuliseyili Quality High ngaphaya Plastic Ss12 Ab T ...
Ihowuliseyili SS8 Hot Sales Rhinestone Ukucheba, Plastic ...
I-Crystal AB iRhinestone yeBhendi yeRhinestone yokucheba ...
Isitshayina i-SS6 Rhinestone banding yokucheba, icrystal Rhi ...
Ihowuliseyili yokuthengisa okushushu kwe-SS8 eshushu kwiRhinestone, uPhungulo lwePlastiki lweRhinestone yokunxiba eGuatemala
Isishwankathelo Iinkcukacha ezikhawulezayo zoMveliso: Uhlobo lweRhinestones Izinto: Iglasi, iRhinestone yeGlasi kunye neMilo yePlastikhi: Uhlobo olujikelezayo lweeRhinestones: Iitekhnoloji zeRhinestones ezikhululekileyo: Isitayile seSew-On: Ukusetyenziswa kweFlatback: Iibhegi, ingubo, izihlangu, umhombiso weDiy, iPati, iiCloythes, Hat, njl. Indawo yokuQala: Zhejiang, China Igama leBrand: Inombolo yeModeli yeMaijiao: 0683 Igama leMveliso: Ukusetyenziswa kwebhendi yeplastikhi yeRhinestone: Ingubo yezihlangu zeengubo T-shirt MOQ: iiyadi ezili-1600 ngombala ngamnye kuMgangatho: kwiBakala A ...
Iglasi, iGlone Rhinestone kunye nePlastiki
Iingxowa, ingubo, izihlangu, ukuhonjiswa kweDiy, iPati, iiCloythes, uMnqwazi, njl.
Iplastiki yeRhinestone banding
Isikipa seengubo zezihlangu
Iiyadi ezili-1600 ngombala ngamnye
Ikhadi leeyadi ezili-10
Uhlobo lokuqhuba ngenqanawe:
Iintsuku ezi-7-15 zokusebenza
Iiyadi ezili-10 ikhadi. Iimitha ezingama-50 ukuqengqeleka. Iimitha ezili-100 umqulu.
Ubungakanani (Piece) 1 - 200000 > 200000
Est. Ixesha (iintsuku) 7 Ukuxoxwa
Material: Ilitye: yikristale yeglasi A +
Umbala: I-Crystal, umbala kunye ne-AB crystal.
Iphakheji: iiyadi ezili-10 ikhadi, iiyadi ezingama-50 ukuqengqeleka,
Ukuhambisa ngenqanawe: iintsuku eziyi-3-15 zokusebenza
Iifayile / iiYadi
Imveliso enxulumene noko
Umtya weNdebe yeRass yeRhinestone
Wamkelekile wazi ngakumbi malunga nenkampani yethu .——I-Yiwu Zhuyi Iifektri zeZacholo zeZacholo
1. Iminyaka engama-20 yamava kuyilo nophuhliso.
2. Zonke iimveliso zenziwe ngokwezifiso kunye nokuhlolwa kwendalo.
3. Advanced ukwenza umngundo izixhobo kunye namaqabane imveliso nokuvunda.
4. Ixabiso eliphantsi le-MOQ kunye nefektri.
5. Inkonzo nganye egqibeleleyo ngenkonzo yasemva kwenkonzo.
COFA APHA Ubungakanani beNkampani
Iinkcukacha Packaging: 10 eyadini ikhadi. Uluhlu lweeyadi ezingama-50. Uluhlu lweeyadi ezili-100.
Izibuko: Yiwu Port kunye Ningbo Port
Est. Ixesha (usuku)
Q1: Yintoni ixabiso kunye MOQ?
A: Ifektri yexabiso elithe ngqo, i-MOQ yethu ziiyadi ezili-1600 ngombala ngamnye.
I-Q2: Ngaba ndingayalela ubungakanani obuncinci?
A: Ewe, inani elincinci lamkelwe.
I-Q3: njani malunga nokuqinisekiswa komgangatho?
A: Zonke iimpahla ziya kuthunyelwa ngaphambi kokujonga umgangatho kwaye siya kuthumela imifanekiso kuwe ukuba itshekishwe, kananjalo sinokuhlolwa komgangatho kwaye ungahlawula ngokuQinisekiswa kokuThengiswa apho i-Alibaba izakuzibandakanya kulawulo lomgangatho njengeqela lesithathu.
Q4: Ngaba unika isampuli?
A. Ewe, sibonelela ngeesampuli zasimahla.
Q5: Luphi urhwebo lwakho?
A: Ngokusekwe kumava oshishino iminyaka eli-10, senze ushishino uninzi lwehlabathi (njengeJamani, i-UK, iFransi, iNetherlands njl. Njl. Australia, New Zealand, Brazil njalo njalo.
I-Q6: Ndiyihlawula njani intengo yam?
A: Ungahlawula ngeKhadi letyala, iBhanki, i-Western Union kunye ne-Paypal njl.
I-Q7: Liliphi ixesha lakho lokuhlawula?
A: I-30% yedipozithi, i-70% yokuhlawula ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa.
Q8: Lide kangakanani ixesha lokuhambisa?
A: Kwi-odolo encinci, ihlala ithatha malunga neentsuku ezi-1 ukuya kwezi-3, ukuze iodolo enkulu ithathe malunga neentsuku ezi-3-15.
I-Q9: Lide kangakanani ixesha lokuhamba?
A: Ngokwesiqhelo, ithatha malunga neentsuku ezisi-7, kodwa kwiindawo ezikude nakumazwe, ithatha malunga neentsuku eziyi-7-15 zomsebenzi.
I-Q10: Ngaba likho inani lokulandela umkhondo we-odolo yam?
A: Ewe, sithumela zonke iimpahla ngenombolo yazo yokulandela umkhondo, kwaye unokujonga imeko yokuthumela kwiwebhusayithi ehambelana nayo.
COFA APHA TUMELA UMBUZO
●Iminyaka engama-20 yamava kuyilo nophuhliso.
● Zonke iimveliso zenziwe ngokwezifiso kunye nokuhlolwa kwendalo.
● Advanced ukwenza umngundo izixhobo kunye namaqabane imveliso nokuvunda.
COFA APHA KWI-HOMEPAGE
●Ixabiso eliphantsi le-MOQ kunye nefektri.
●Inkonzo nganye egqibeleleyo ngenkonzo yasemva kwenkonzo.
Jonga iwebhusayithi yomthengisi
Ayisiyiyo kanye le uyifunayo? Isicelo esinye, iikowuteshini ezininzi Fumana iikowuteshini ngoku >>
Ukuphendla okunxulumene noko:
Rhinestone irhinestone iribhoni intonga yentsimbi kwiirhinestones
Rhinestone trim trim flat back acrylic rhinestones iiplastiki irhinestone amaqhosha
ukulungisa okushushu iirhinestones zerhinestone iirhinestone buckles thunga ngerhinestones
I-Yiwu Zhuyi Iifektri zeZacholo zeZacholo
Wanelisekile uphononongo olu-8
Intengiselwano yomthengisi eqhutywa ngeAlibaba.com kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo.
Jonga iProfayile yeNkampani
Egqithileyo Ukulinganiselwa okushushu kwePlastiki yeRhinestone yoCingo lwePlastikhi yokuThengisa iRhinestone
Okulandelayo: I-SS6 SS8 yokucheba iNdebe yeNdebe yokuCoca iRhinestone yokucheba iimpahla
I-SS6 AB yeeNdawo zokuLungisa zePlati zokuCoca iRhin ...
2.7mm Custom kunye Ihowuliseyili Clothing ...
Ihowuliseyili Factory Elungiselelweyo 3.2 mm Rhinestone ...
China Factory Factory Plastic Rhinestone Band ...
Ukuthunga kwi ingubo Diamond Plastic Rhinestone Bandi ...
Ihowuliseyili Rhinestone Nquma Trinesto Plastic ...
Lwedilesi:Kwikomkhulu: Hayi. 16, Ukulinda, iDaling Village, iSitalato iYisanli, iSixeko saseYiwu, kwiPhondo laseZhejiang, China
Ifowuni yasimahla: 0086 13958400086